Wararka - Sidee loo doortaa dheecaanka aasaasiga ah ee ugu fiican?
Aasaaskayaga ugu iibinta badan ee iibiya ayaa hadda ku jira 40 hoos! Qaaciddada fudud, caanaha aan saliidda lahayn ayaa si dabiici ah ugu milma maqaarka dhammaystirka nus-dhamaadka quruxda badan ee soconaya maalinta oo dhan. Qaaciddada dareeraha ahi waxay gacan ka geysataa soo celinta maqaarka maqaarka oo aan sinnayn iyo codadka maqaarka muuqda. Waxay kufiicantahay dhamaan noocyada maqaarka iyo qaacidadan miisaanka fudud waxay bixisaa dabool si ay ucaawiso xitaa maqaarka maqaarka waxayna yareyneysaa finanka finanka iyadoo shaqeyneysa si loo caawiyo nadiifinta maqaarkaaga.
Haye, qurxinta maqaarka dufan leh! Aynu ku bilowno warka wanaagsan: Kuwa leh saliid dheeri ah oo dheeri ah ayaa lagu barakeeyay maqaarka jilicsan ee u nugul duudduubashada oo badanaa leh qorraxda dabiiciga ah. Dheeraad ah - dharab baa ku jira! Marka, yay! Waxaa jira taas.
Laakiin, dhinaca galka, kuwa maqaarka dufan leh waxay ogyihiin in, inaad mooyee aad si caqli ah u xulan badeecadaada, Slide-ka uu yahay mid dhab ah, iyo in qurxinta la isku qurxiyo ay ahaato mid cusub oo aan dhalaalin. Aasaaska wuxuu si gaar ah ugu nugul yahay helitaanka xoqida iyo isbadbadalka — lakabkaas salka ahna wuxuu u socdaa si taxaddar leh oo aad u adeegsatay wax kasta oo kale. Niyad jab!
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay haddii aad leedahay maqaar dufan leh si aad u doorato alaabada si gaar ah loogu talagalay nooca maqaarkaaga. Haddii aad ku dhibtootay Shine-ka laakiin waligaa ha isku dayin badeecooyin ku wajahan, nagu kalsoonow. Waa wadar beddel ciyaarta.
Waa tan jadwalkayaga saddexda tallaabo ah ee loogu talagalay in lagu qurxiyo saldhigga qurxinta ee maqaarka dufanka leh:
TALLAABADA # 1: KU DALBAD HOYGA MAQAARKA SILIDA
Waxaa la yaab leh, aasaaska aasaasiga ah ee aasaasiga ahi waa wax soo saar weyn oo loogu talagalay maqaarka dufanka leh! Kaliya waa lakab kale oo awood ah wajigaaga! Waxaa loo adeegsaday aasaaska, Eraser Maqaarka Dhallaanka ah ee aan-comedogenic Eraser iyo Face Studio Master Prime Primer Makeup in Blur + Pore Minimize wuxuu ka dhigayaa daloolada aan la arki karin, googoyn dhalaalaya oo caawiya qurxinta inay sii dheeraato.
TALLAABADA # 2: KU DALBAA SALDHIGA MAQAALKA SILIDA
Waxaan kugula talineynaa aasaaskayaga ugu wanaagsan ee maqaarka dufanka leh, Jinfuya Matte + Pore-less Foundation. Abaalmarintan abaalmarinta ah, aasaaska daboolida-dhexe waxay leedahay hub qarsoodi ah oo lagu dhex-dhex-dhexaadiyey si dabiici ah saliid-u-nuugid, dhoobo matay! Waxaa sidoo kale ku jira maadooyin aad u yar-yar oo budo yar yar ah oo xakameeya dhalaalka isla markaana qari kara muuqaalka daloolada iyada oo aan wax nuurad ah ama haraag ah lahayn. Waxayna umuuqataa sida maqaarka oo kale - aad dabiici ah oo qurux badan.
Waxaad sidoo kale tijaabin kartaa Jinfuya Shine-Free + Balance Stick Foundation. Aasaaska dhaggu waa mid dhib badan haddii aad leedahay maqaar dufan leh - qaaciidadu waa, dabiiciyan, waa mid aad u kareem badan. Laakiin aasaaskan miisaanka culus wuxuu ku leeyahay udub dhexaad u ah budada lidka-dhalaalka oo isla markiiba ku milmaya saliida xad-dhaafka ah xoqid kasta!
Ku hel hadhkaaga aasaaska Jinfuya aaladdayada Jinfuya Regimen Finder.
TALLAABADA # 3: KU DALBAN DIIWAAN BADBAADKA MAQAARKA SAAWIDKA
Haddii aad leedahay maqaar dufan leh markaa waxaad u badan tahay inaad mar hore budo ku haysatid arsenal quruxdaada - waa tan ugu dambeysa ee tooska u iftiimaya. Laakiin! Dhammaan ma wada siman yihiin.
Budada la cadaadiyey-iyo xitaa budooyinka dabacsan qaarkood ayaa badanaa lagu shubaa saliid. In kasta oo laga yaabo inay bixiyaan deg-deg deg-deg ah oo dufan leh, waxay dhab ahaantii gacan ka geysan karaan dhalaalka qurxintaada. Xulkeena Ku daatay qurxinta iyo maalinta oo dhan, Shidaalka Bilaashka ah ee Saliida Lahaanta ah ayaa maqaarka ka dhigaya mid cusub, nadiif ah, oo aan dhalaalin saacado waana, sida magacu sheegayo, 100% saliid la'aan.